အတိုင်ပင်ခံရဲ့ Mask ပြိုင်ပွဲမှာ အထူးဆုအဖြစ် ရုရှားသံအမတ်ကြီး ရွေးချယ်ခံရ
မိသားစုဝင်သုံးဦးစလုံး ရုရှားလီနင်သားနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ Mask တွေတပ်ပြီး ဓာတ်ပုံတင်ကာ ပြိုင်ပွဲကို ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Mask ပြိုင်ပွဲမှာ နောက်ဆုံးကြေညာဖို့ကျန်ရှိနေတဲ့ ဆုစာရင်းကို ယနေ့ညနေပိုင်းမှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ကြေညာခဲ့တဲ့ ဆုအမျိုးအစားတွေထဲမှာ အထူးဆုအနေနဲ့ ရုရှားသံအမတ်ကြီးမိသားစုကို အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားသံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Nikolay Listopadov နဲ့ မိသားစုဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Mask ပြိုင်ပွဲကို စိတ်ဝင်တစားရှိခဲ့ပြီး မိသားစုဝင်သုံးဦးစလုံး ရုရှားလီနင်သားနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ Mask တွေတပ်ပြီး ဓာတ်ပုံတင်ကာ ပြိုင်ပွဲကို ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အထူးဆုအဖြစ်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့တာပါ။ "ကျွန်မ အထူးဆုတစ်ခုချီးမြှင့်ပါမယ်။ ဒီဆုကတော့ ရုရှနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Nikolay Listopadov နဲ့မိသားစုအတွက်ပါ။ ကျွန်မတို့ ပြိုင်ပွဲကိုအားပေးလိုတဲ့စိတ်နဲ့ မိသားစုဝင် (၃)ဦးလုံး ရုရှလင်နင်သားနဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ mask တွေတပ်ဆင်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံက စိတ်ရွှင်လန်းစရာပါ။" လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Mask ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရွေးချယ်ပေးအပ်ခံရသူတွေဟာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူ Video Conferencing ပြုလုပ်ခွင့်ရမယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အဝတ် Mask တွေ ကိုယ်တိုင်ချုပ်လုပ်အသုံးပြုစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Mask ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် နှစ်သောင်းကျော်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။